Te hahafantatra bebe kokoa momba ny lahatsoratra notsoahana? & Ndash; Anontanio ny Expert of Semalt, Natalia Khachaturyan
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny lahatsoratra notsoahana? - Anontanio ny Expert of Semalt, Natalia Khachaturyan
Ny famerenana lahatsoratra iray tany am-piandohana dia mihoatra ny roanjato izay miezaka manamboatra kopia marobe maromaro afaka mitarika ho amin'ny duplication ny votoaty. Ao amin'ny tontolon'ny fikarohana fikarohana (SEO), ny fandefasana sy famoahana ny votoaty vaovao ao amin'ny tranokalanao matetika dia tena manan-danja. Ny famoahana sy famoahana votoaty ao amin'ny tranokala e-commerce dia manampy ny hisarihana ireo mpitsidika mety hitranga ary hamelezana ny tanjonao amin'ny fotoana tena izy - scivoli bambini usati.
The Strategist Content of Semalt , Natalia Khachaturyan, dia milaza fa ny mpikirakira web toa an'i Google dia mampiasa antony sasany hametrahana ny tranokalanao amin'ny algorithm, ny tenimiafinao miovaova ho iray dia iray amin'ireo singa manan-danja. Amin'ny maha-mpividy tranonkala anao dia tsy tianao ny hanatsara ny tenimiafinao miovaova amin'ny algorithms amin'ny alàlan'ny fikarohana. Ny famoronana fahitana an-tserasera dia mametraka fahamalinana sy fahaiza-mamorona.
Inona ilay lahatsoratra miolakolaka?
Ny famoronana dikan-teny samihafa amin'ny lahatsoratra iray hanehoana avo lenta amin'ny algorithm dia mety hanimba ny ezaka SEO anao. Araka ny voalazan'ny manam-pahaizana manam-pahaizana momba ny fikarohana, ny lahatsoratra dia mitatatata dia kapila mainty SEO, izay matetika ampiasaina ho toy ny fohy ataon'ny mpividy nomerika sy ny votoaty. Amin'ny tena dikany, ny famokarana votoaty mampiasa ny atidohanao dia mifarana amin'ny fotoam-pialan-tsasatra raha ampitahaina amin'ny famoahana lahatsoratra efa misy.
Ny famoronana dia tsy safidy raha manatsara ny fahitana ny raharaham-barotra. Rehefa mamaky lahatsoratra iray dia tsy voatery hanan-kevitra ny lahatsoratra farany. Miezaka mamerina mamoaka indray ny votoatinao imbetsaka vokatra amin'ny teny filamatra. Google dia manana fomba iray ahafantarana ny fakana an-tsokosoko sy ny famoahana lahatsoratra..
Ny fandefasana ny votoaty ao amin'ny tranonkalanao WordPress dia afaka manimba ny fifamindram-pahefana. Raha mbola manohy mamoaka ny votoatiny voasoratra ao amin'ny tranokalanao ianao, ny mpitsidika mety hitranga dia hiverina hitsidika ny pejinao, mitarika amin'ny faharetan'ny sesyon ambany sy ny sanda avo lenta. Ny taham-pitenenana avo dia tsy mety ho an'ny orinasan-tserasera ary mety hitarika ho amin'ny fihenam-bidy lehibe eo amin'ny famolavolana tenimiafinao amin'ny famolavolana azy satria ny hevi-teny dia heverina ho tsy misy dikany amin'ny fikarohana.
Ny famoahana dikan-teny an-jatony na an'arivony amin'io lahatsoratra io ihany dia mety henjika. Ity dia misy ny rindrankajy famoahana lahatsoratra. Ny mpilalao lahatsoratra dia afaka mametraka anao ambony amin'ny algorithms amin'ny fotoana tena izy. Na dia izany aza dia sarotra ny hamaky ireo lahatsoratra novokarin'ny mpamaky lahatsoratra noho ny fametrahana ny teny sy fehezanteny tokana tokana.
Manampy ny valiny ve ny lahatsoratra?
Ny artikla mirongatra dia iray amin'ireo fifanarahana azo itokisana izay afaka mampiova ny lahatahirinao amin'ny teny ifanaovana ao anatin'ny fotoana fohy. Na dia izany aza, ny fanatsarana ny sangan'asan'ny tranonkalanao amin'ny fampiasana teknolojia mainty SEO dia tetikady fohy izay mety tsy hampandrosoana ny fanentanana amin'ny ho avy.
Ny tanjona voalohany amin'ny famoahana lahatsoratra dia ny mamorona pejy sasantsasany momba ny lohahevitra iray manan-danja tahaka ny kopia tany am-boalohany. Rehefa avy namorona votoaty ny votoatin'ny dizitaly, ka anisan'izany ny backlinks ho an'ny tranokalany ao anatin'ny votoaty entana. Ho ela velona, ​​ireo rohy dia midika ho fitadiavana ireo fitaovana ireo fa malaza sy malaza izy ireo mametraka ny tranokalany ho amin'ny toerana tsara kokoa amin'ny fandaharana.
Ny famokarana ny votoatiny tsara amin'ny lahatsoratra iray dia mety hikorontana. Amin'ny maha-mpandraharaha ara-barotra anao, afaka manapa-kevitra ny hampiasa andian-dahatsoratra ianao mba hamoronana dika maro amin'ny antontan-taratasinao voalohany. Na izany aza, Google dia hanasazy mandrakariva ny votoaty. Eritrereto amin'ny fampiharana ireo teknolojia fotsy SEO misy anao mba hahalalanao vahaolana maharitra ho an'ny fanentanana an-tserasera.